Umthandazo kuSanta Marta Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kweli nqaku siza kuthetha nge Umthandazo kuSanta Marta, Ukuba uhamba ngamaxesha anzima anokugcwalisa kukubandezeleka okanye utyhubela imeko enzima apho ungasifumaniyo isisombululo, eli linqaku lakho kuba iSanta Marta isinceda ngamaxesha angxamisekileyo.
Ukuprinta kweSanta Marta
1 Ngubani oyena mntu wakhuthazayo emthandazweni oya eSanta Marta?
2 Umthandazo kuSanta Marta
2.1 Umthandazo oya eSanta Marta ngoLwesibini
2.2 Umthandazo kuSanta Marta wothando olunzima
2.3 INovena iya eSanta Marta
Ngubani oyena mntu wakhuthazayo emthandazweni oya eSanta Marta?
USanta Marta wazalelwa eBethany, phantse iJerusalem, apho akhulele khona nabantakwabo uLázaro noMaría de Betania. Ibali lithi uMarta wamkela uYesu endlwini yakhe ngezihlandlo ezininzi xa wayetyelele idolophu yakhe.
Ukuqhubeka nebali lalo mfazi unesidima, sifumanisa ukuba wayengumama wasekhaya, emamele kwaye enobubele, ehlala ekulungele ukunceda nabani na oyifunayo. Ke, ngesinye isihlandlo xa umntakwabo uLazaro wayegula, wathandazela impilo yomntakwabo kwaye wathandaza kuThixo ukuba amvuse. Singalifumana eli bali eBhayibhileni, iVangeli kaYohane, Isahluko 11, iVesi 5.
Kungenxa yoko le nto uMarta ebizwa ngokuba yi-Patron Saint yaMama, ukungenisa izindlu, abapheki, iihotele, abasebenzi basekhaya, ukuhlamba iimpahla, phakathi kwabanye.
WayengumKristu, uSanta Marta wafundisa imfundiso kaYesu, iCawa ibhiyozela ngokuzinikela okukhulu lo mfazi washiya yonke into ukuze afundise izifundo zikaYesu, wanikela ngobomi bakhe ekuncedeni abanye kwindlela yokunyaniseka nokunyaniseka.
Ngesi sizathu, iSanta Marta ikhunjulwa rhoqo nge-29 kaJulayi, namhlanje abazinikelayo bayambulela ngobabalo abalufumeneyo. Wayebizwa ngokuba yiNgcwele yecawa. E-Spain izukisiwe ngokubhiyozela amaMoor namaKrestu, kwaye kwezinye iidolophu kwenziwa umngcelele wokuphakamisa iSanta Marta. Unokufunda inqaku lethu ku Umthandazo wokufumana izinto ezilahlekileyo
UMartha oNgcwele kunye nodadewabo uMariya, bekhonza uYesu
Umthandazo oya eSanta Marta ngoLwesibini
NgoLwesibini, abathembekileyo bakhe bathatha iminikelo yabo bayise ezicaweni, njengomqondiso wokuzinikela kwabo. Ukwenza isiko lomthandazo, kukhethwa ii-9 ngooLwezibini zilandelelana, xa uthandaza kukhanyisiwe kwaye ngosuku ngalunye injongo iyabuzwa okanye iyathethwa.
«Santa mía, Santa Marta, ndizimela ngokukhuselwa nakukhuselo lwakho, kubungqina bothando lwam kunye nokholo lwam, ndikunika oku kukhanya kukunika imbeko kuwe ndizakujika njalo ngoLwesibini.
Ndithuthuzele kwiintlungu zam nakulonwabo olukhulu enibe nalo ngokusingatha uMsindisi ekhayeni lenu, ndithandazeleni mna kunye nalo lonke usapho lwam ukuze sihlale simgcina uThixo ezintliziyweni zethu kwaye sizibone zonke iimfuno zethu zisonjululwa.
Ndiyakucela ukuba ube nenceba engapheliyo ngenxa yenceba endiyifunayo kuwe namhlanje. (Yenza isicelo) Ndiyakucela, Oyingcwele yam, ukuba woyise bonke ubunzima, njengoko woyisile inamba onayo ezinyaweni zakho.
Sithandaza uBawo Wethu, Yibonge uMariya kunye noGloria.
Umthandazo kuSanta Marta wothando olunzima
USanta Marta, owaziwa ngokuba ngumphathi wesanta wothando kunye nezizathu ezilahlekileyo, uya kukukhokela kwaye alamle phambi kwakho, ngaphambi kolo thando ulinqwenela kakhulu kwaye intliziyo yakho ilulangazelela, uya kukunceda ufumane iqabane elifanelekileyo kuwe, ukuba unayo ukholo oluninzi luya kuza kubizo lwakho kwaye lukukhokele ngendlela engummangaliso.
«Hayi, nkosikazi yam, Ntombi eNgcwele, Ngcwele yam,
Ndiyaguqa phambi kwakho ngenxa yenceba yenceba yakho kunye nokukhusela.
Ndicela ukukhuselwa kwakho, njengobungqina bokuba ndiyakuthanda.
Egameni lakho ndikhanyisa le khandlela, ukuhlonipha irhafu kwinkosikazi yam.
Hlala undithuthuzela ngamaxesha obunzima,
Ngendlela eya kuba nethuba elimnandi lokubonelela ngendawo yokuhlala
kwiNkosi yethu uYesu kwigumbi lakho eliphantsi.
Namhlanje, ndiyakucela ukuba ube ngumlandeli wobomi bam kunye nommeli wosapho lwam, ukuze sihlale sikhona uThixo ezintliziyweni zethu,
Ngawo onke amaxesha sifumana isisombululo kwintlungu yethu,
ukuba sixinezelekile ngamaxesha okudandatheka.
Ndiyakucela, nceda, ukuba ube nenceba kaThixo kum, ngokubhekisele kum nakwinjongo endicinga ukuba ndikubuza ngokholo olukhulu, ukuba ndifuna isisombululo kuyo kakhulu (Apha ubhengeza ngelizwi elinamandla kwaye uzinikele kakhulu Isicelo sothando olunzima)
Santa Marta, ndiyakubongoza ukuba undincede, ukuze ube liqabane lam kwaye ecaleni kwakho ndiphumelele ebusweni bazo zonke iinkxwaleko zothando ubomi bam obuhamba ngaphandle kwemfesane.
INovena iya eSanta Marta
Le iseti yemithandazo eyenzelwa iintsuku ezili-9, ukuze ikucele ubabalo olukhethekileyo. Le novena yenziwe nge umthandazo wemihla ngemihla kunye nesicelo sakho. Kwangokunjalo, umthandazo wemihla ngemihla sisicelo esithe ngqo kuThixo ukuze ngongenelelo lwakhe asincede kwisicelo sethu.
Ngosuku lokuqala umthandazo wenziwa kuphela eSanta Marta ukuba asilamle, kusuku lwesibini esele simvakalisile njengoMkhuseli wethu, kwezi ntsuku zilandelayo kuthethwa ngendlela uSanta Marta amnceda ngayo uYesu xa wayedlula el mundo kwaye njengoko wayephilisa iimfuno zosapho xa wayevusa umntakwabo uLazaro.
Iintsuku ezi-3 zokugqibela ze-novena zibalwa njenge-Santa Marta, wayephilisa idolophu nganye ekufuphi, kuthiwa wabulala inamba yiyo loo nto simbona emelwe yinamba ezinyaweni zakhe kwaye wayengowokuqala ukusebenzisa amanzi angcwele ukuphilisa.
Kwangokunjalo, iSanta Marta enkulu yiyo amarhamente amaninzi aya kuyo xa ezifumana engenazo ezinye izisombululo, kuba ingumxhasi wezinto ezilahlekileyo njengoko sele kukhankanyiwe, xa wayesemoyeni wenza isithembiso, soze Umntu uphathwe luthando olungenakwenzeka kuba naye ngokwakhe waphathwa yenye.
Okokugqibela, khumbula ukuba xa uziva unxunguphalo okanye ungasiboni isisombululo sengxaki, okanye ufuna ukufezekisa okanye ukufezekisa injongo, qalisa usuku lwakho ngomthandazo oya eSanta Marta, ngokholo olukhulu, ukuzithemba nokuzinikela, njengoko wenzayo ngaphambili INkosi yethu uYesu.